डा. केसीको जीवन रक्षा माग गर्दै प्रदर्शन- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ३, २०७५ तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ
काठमाडौँ — जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाकाे माग गर्दै काठमाडाैंमा बिहीबार पनि र्‍याली र प्रदर्शन भएकाे छ । माइतीघर देखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्‍याली र प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनमा नागरिक अगुवा, चिकित्सकलगायत विभिन्न पेसा, व्यवसायमा आवद्ध व्यक्ति सहभागी छन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ १३:२६
श्रावण ३, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोबिन्द केसी काठमाडौं आउन तयार भएका छन् । उनले आफ्ना सहयोगी र लिनका लागि राजधानीबाट गएको टोलीसँग काठमाडौं जान सहमत भएको जनाएका हुन् ।
‘डाक्टर साबले म काठमाडौं जान्छु भन्नु भएको छ,’ स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनीले टेलिफोनमा कान्तिपुर सँग भने, ‘केहि बेरमा उहाँलाई लिएर आउँछौं ।’
यसअघि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विद्यार्थी र आन्दोलन उत्रिएका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले दमन गरेको थियो । प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको बताइएको छ ।
डा. केसीले स्थिति फरक भएकोले आफु राजधानी जान तयार भएको बताएका हुन् ।
सरकारले बिहिबार बिहान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव खगराज बराल र महानिर्देशक लोहनीलाई केसीको उद्धार गरी काठमाडौं ल्याउन हेलिकप्टर सहित जुम्ला पठाएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीको समेत सहयोगमा डा. केसीको उपचार गरि जीवन रक्षा गर्न काठमाडौं ल्याउन लागिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरि जनाएका थिए । उनको शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्ने सरकारी तयारी छ । सबभन्दा पहिला केसीको उपचार गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व भएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ १३:१५
तस्बिरमा हेर्नुहोस्, विश्व आदिवासी दिवस
यसरी नियन्त्रणमा लिइयो सुबिसु कार्यालयमा लागेको आगो